မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အခြေခံပညာအစိုးရ အထက်တန်းကျောင်းများတွင် ကျောင်းသား/ ကောျင်းသူများ မိမိနိုင်ငံအကြောင်း၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများအကြောင်း ၊ တိုင်းရင်းသားများအကြောင်းစသည်ဖြင့် လေ့လာသင်ယူနိုင်ရန်အတွက် DPS Co.,Ltd. မှ Myanmar Guide Map မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးပြ နံရံကပ်မြေပုံများကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှတစ်ဆင့် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းအချို့သို့ ပေးပို့လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ မြေပုံအရေအတွက်များစွာ ထပ်မံလိုအပ်လျက်ရှိသောကြောင့် လှူဒါန်းလိုသော အလှူရှင်များအတွက် မြေပုံပုံနှိပ်ပေးခြင်းကို DPS Co.,Ltd.မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသဖြင့် လှူဒါန်းလိုသူများအနေဖြင့် အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရန် - 09 774 20 40 20, 09 775 20 40 20, 09 455 20 40 20
အိမ်နံပါတ် (Database) ပြုစုရန် ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီးတွင် GPS Camera များတပ်ဆင်၍ Survey ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အိမ်တစ်ခုချင်းရှေ့တွင် GPS Point များ၊ ဓာတ်ပုံများရိုတ်၍ အချက်အလက်များစုဆောင်းခြင္း။
Drone အသုံးပြု၍ ရိုက်ကူးထားသော Update Aerial Photo များမှ မိမိပိုင် အိမ် ၊ ခြံ ၊ မြေ နှင့် လယ်မြေ ၊ ယာမြေများ Site Plan ပုံများကို ဘယ်လိုထုတ်ယူမလဲ?
မိမိပိုင် အိမ်၊ခြံ၊မြေနှင့် လယ်မြေ ၊ ယာမြေများ၏ Aerial Photo မြေမျက်နှာသွင်ပြင် အနိမ့်အမြင့်ပြ Digital Elevation Model (DEM) ပုံများ ၊ Contour မြေပုံများ၊ Site Plan များထုတ်ယူလိုလျှင် Drone ဖြင့် ကောင်းကင်မှ ရိုက်ကူးထား သော Update Aerial Photo များကို အသုံးပြု၍ အရည်အသွေး မြင့်မားသော Site Plan ပုံများကိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပြီး Site Plan Area များတွက်ချက်ပေးခြင်း ၊ Site Plan Area အတွင်း ရေစီးရေလာနှင့် ရေလွှမ်းမိုးနိုင်မှု အခြေအနေများကိုလည်း ကြိုတင်တွက်ချက်နိုင်ခြင်း၊ Site Plan Area ၏ဘယ်နေရာတွင် ဘယ်လိုအဆောက်အဦ ဆောက်သင့်သလဲ? ရေမြောင်းကို ဘယ်လိုဖောက်သင့်သလဲ? အပင်များကို ဘယ်လိုပုံစံစိုက်ပျိုးသင့်သလဲ? စသည့် မြေမျက်နှာသွင်ပြင် အနိမ့်အမြင့်နှင့် ပတ်သက်သည့် Data များရရှိနိုင်ပါသည်။
Drone Aerial Photo ကို အသုံးပြု၍ မြေပုံများထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများ
1.	မိမိပိုင် မြေကွက်၏ မြေမျက်နှာသွင်ပြင် နှင့် ပတ်သက်သည့် ( Update Aerial Photo) များရရှိနိုင်ခြင်း။
2.	မြေပြင် အနိမ့်အမြင့်ကို သိရှိနိုင်သည့် Digital Elevation Model (DEM) ပုံများရရှိနိုင်ခြင်း။
3.	မြေပြင်အနိမ့်အမြင့်ကို သိရှိနိုင်သည့် Contour Map များရရှိနိုင်သည်။
4.	မိမိပိုင်မြေကွက်ပေါ်တွင် စိုက်ပျိုးထားသောအပင်များ (သို့) သဘာဝပေါက်ရောက်နေသောအပင်များ၏ အရေအတွက်နှင့် အပင်ကောင်းမကောင်း အခြေအနေစသည့်တို့ကို သိရှိနိုင်သည်။
5.	မိမိပိုင်မြေကွက်တွင် ရေမြောင်များ ဖောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ရေပိုက်လိုင်းများသွယ်တန်းခြင်းတို့အတွက် မှန်ကန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များပေးနိုင်သည်။
6. မြေပြင်အနိမ့်အမြင့်နှင့်ရေလွှမ်းမိုးမှုအခြေအနေကို ထင်ရှားစွာတွေ့မြင်နိုင်သဖြင့် လူနေအဆောက်အဦး များနှင့် အခြားအရေးကြီးသော အဆောက်အဦးများဆောက်လုပ်ခြင်းတို့အတွက် မှန်ကန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များ ပေးနိုင်ပါသည္။
Drone မှရိုက်ကူးထားသော Aerial Photo မှထုတ်ယူရရှိသည့် Site Plan ပုံနမူနာများ
GPS စနစ်သုံး မော်တော်ယာဉ်ခြေရာခံစက် (GPS Tracking)
ယာဉ်၏ တည်နေရာနှင့် သွားရာလမ်းကြောင်းကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း။
Internet လိုင်းမမိချိန်၌ ပြတ်တောက်ထားမှုကို Internet ပြန်ရချိန်တွင် Data ကို Server ပေါ်သို့ ပြန်တင်ပေးခြင်း။
စက်ထဲမှ SIM Card ကို ဖုန်းခေါ်လိုက်ရုံဖြင့် ရောက်ရှိနေသော Location ကို SMS စနစ်ဖြင့် Auto Reply ပြန်ခြင်း။
ခရီးသွားနေသော ယာဉ်၏ Total Mileage (km), Data များကို (Internet) Online စနစ်ဖြင့် Download လုပ်ယူနိုင်ခြင်း။
Real Time စနစ်အတွက် MPT, Telenor SIM Card များကို အသုံးပြုရခြင်း။
ယာဉ်ပေါ်မှ အသံများကို ပြန်၍ကြားနိုင်သော Voice Service ပါဝင်ခြင်း။
6 Volt Power Bank ဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။
Speed သတ်မှတ်ပေးနိုင်ခြင်း။ Route သတ်မှတ်ပေးနိုင်ခြင်း။
Online တွင် (၃)လစာလမ်းကြောင်းများကို Playback ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း။
SOS စနစ်များ ရရှိနိုင်ခြင်း။
Interval Record သတ်မှတ်ပေးနိုင်ခြင်း။
Tourist Maps Myanmar 68th Issue (June - 2017)ကိုထုတ်ဝေ၍ ဖြန်ချိဝေငှပေးနေပြီဖြစ်ပြီးလာမည့် Peak Season တွင် လုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါကြော်ငြာရှင်များမှ အင်တိုက်အားတိုက် ကြော်ငြာထည့်သွင်းထားပါသည်။ အဆိုပါမြေပုံတွင် ကြော်ငြာထည့်သွင်းလိုသော လုပ်ငန်းရှင်များအနေနှင့်လည်း DPS Co., Ltd. 09 774204020, 09 775204020 သို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
Tourist Maps Of Myanmar 68th Issue (June - 2017) is already launched. In order to get high performance in the peak season, the following advertising clients are advertising all out effort. And New Customers are welcome for Tourist Maps Advertising. Please free freely to contact, DPS Co., Ltd. 09 774204020, 09 775204020
» Company letter head, envelops and stationery	» Silk-screen printing services
Telecommunication လုပ်ငန်းများ အနေဖြင့် မိမိတို့တည်ဆောက်လိုသော Telecom Tower များ၏ X,Y ကိုပေးရုံဖြင့် မြေပုံပေါ်တင်ပြီး မြေပုံစာအုပ်ထုတ်ပေးခြင်းများကို ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
Site Hunting, Site Acquisition, Land Lease, Contrast and Legal Service နှင့် Site တစ်ခုခြင်း၏ လိုအပ်သော Detail အချက်အလက်အားလုံးကို လိုက်လံ ကောက်ခံပေးခြင်းများ ၊ Report လုပ်ပေးခြင်းများအား ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
စိုက်ပျိုးမြေများ ၊ အိမ် ၊ ခြံ ၊ မြေများ ၊ စက်မှုဇုန်များအတွက် မြေကွက်များ တိုင်းတာတွက်ချက်ခြင်း ၊ မြေပုံ Site Plan များရေးဆွဲပေးခြင်း ၊ လမ်းဖောက်လုပ်ရန် လမ်းအူမြောင်းများ ရှာပေးခြင်း ၊ လမ်း အကွာအဝေးများ တွက်ချက် တိုင်းတာခြင်း ၊ သတ္တုရှာဖွေခြင်း ၊ လုပ်ငန်းများ အတွက် စီမံကိန်းမြေကွက်များကို ဂြိုလ်တုပုံများပေါ်တွင် အကွက်ချ၍ အသေးစိတ်ကို လိုအပ်သော Paper Size အမျိုးမျိုးဖြင့် Print ထုတ်ပေးခြင်း ။
လူမှုရေး ၊ ကျန်းမာရေး ၊ ပညာရေး ၊ စီးပွားရေး ဈေးကွက်လုပ်ငန်းများ ၊ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ အစရှိသည့်လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် မြို့ ၊ ရွာများနှင့် လမ်းများ၏ တည်နေရာများ ၊ ရပ်ကွက် ၊ ကျေးရွာအုပ်စုများ၏ တည်နေရာများ အသေးစိတ်မြေနေရာများကို လူဦးရေ ၊ အကျယ်အဝန်းနှင့် အခြားမိမိလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် အချက်အလက်များနှင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ရန် စီစဉ်ထားသည့် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးမြို့နယ် ၊ ကျေးရွာအုပ်စုစသည့် မြေပုံများကို GIS Database Software များအသွင်ဖြင့် အချိန်တိုအတွင်း ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
မိမိနှစ်သက်သောမြေပုံကို မိမိတို့လိုအပ်သော အရွယ်အစားနှင့် မိမိတို့ထည့်သွင်းလိုသော Logo များ ၊ ထည့်သွင်းလိုသောအချက်အလက်များကို Vinyl (သို့မဟုတ်) Photo Paper ဖြင့်ပုံကြီးချဲ့၍ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ Plot ထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ရရှိနိုင်သော မြေပုံများမှာ ကမ္ဘာ့မြေပုံ ၊ မြန်မာပြည်မြေပုံများမှ အစ မြို့တစ်မြို့ချင်းမြေပုံ အသင့်ရေးဆွဲပြီးစီးသည်အထိ ရရှိနိုင်ပါသည်။
မြေပုံနှင့် တစ်ပါတည်းကြောငြာနိုင်သည့် ကိုယ်ပိုင် Guide Map များ ၊ လက်ကမ်းစာစောင်များကို ပြီးစီးသည်အထိ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
မြေပုံ ပုံကြမ်းပေးပါက ပုံချောဖြစ်အောင် ရေးဆွဲပေးသည့် ဝန်ဆောင်မိမိလယ်မြေ၊ ကွင်းကိုတိုင်းရန် GPS ငှားသည်၊ ရောင်းသည်။ မြေပုံထွက်သည်အထိဆောင်ရွက်ပေးသည်။
ကွင်းပုံများ မိမိကိုယ်တိုင်ပြုစုလို့ရ၊ အမြင့်ပါသိရမယ်။
သောင်ထွန်းနူံးတင်မြေနုများ တိုးပွားလာခြင်း၊ ရေတိုက်စား၊ မြေပြိုမှုကြောင့်လျော့နည်းသွားခြင်းနှင့် မြေလွတ်၊ မြေရိုင်းများ ခြံ၊ မြေ၊ လယ်မြေများ မြေပုံတိုင်းတာပြုစုနိုင်ပြီ။
မြောင်းပြောင်းပြန် မဖောက်မိရန် အနိမ့်အမြင့် အခြေအနေများကို တိုင်းနိုင်မယ်။ Barometric Altimeter ယခင်ကမြေပုံဟောင်းများရှိခဲ့ပြီ တိုင်းခဲ့ပြီးသောကွင်း (သို့) ခြံမြေ၊ လယ်မြေများကို လက်ရှိအခြေအနေများအတိုင်း မြေပုံများပြန်လည်ပြုစုနိုင်မည်။ ဧရိယာအမှန်ရမည်။
မြေပုံဟောင်းများရှိအတိုင်းအတာအကွက်များနှင့် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောအတိုင်းအတာများကို လွယ်ကူစွာ မြေပုံများပြုစုရေးဆွဲနိုင်မည်။
ကွင်းဆင်းရေးဆွဲထားသောလယ်မြေ၊ ယာမြေ၊ ခြံမြေများကို တကယ့်မြေပြင်ဂြိုလ်တုပုံမြင်ကွင်းများဖြင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးနိုင်မည်။
စပါးခင်း၊ ပဲခင်း၊ ကျွန်းစိုက်ခင်း၊ သစ်မွှေး၊ ရာဘာ၊ ဆီအုန်း ဧကကွက်များအားလုက်ရှိပါသည်။
လက်ကမ်းစာစောင်များ (Flyers, Brouchers) ၊ ပြက္ခဒိန် (စားပွဲတင် ၊ နံရံကပ် ၊ အိပ်ဆောင် ) အမျိုးမျိုး ၊ Post Card , Greeting Card, New Year Card, Christmas Card အမျိုးမျိုး ၊ လိပ်စာကဒ် ၊ Letter Head, Envelope အမျိုးမျိုး ၊ Silk-Screen Printing-Cotton Banner, Board အမျိုးမျိုး ၊ Sticker အမျိုးမျိုး ၊ တီရှပ်များ ၊ စပို့ရှပ်များ ပေါ်တွင် ကုမ္မဏီ Logo အမှတ်တံဆိပ် တီထွင်ရေးဆွဲပေးခြင်းတို့ကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ဖြန့်ချိရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်အထူးသင့်လျော်သော မြို့တွင်းခရီးသွားလမ်းမှတ်တမ်းစနစ် (Vehicle Tracking Sytem)
ကားတစီးခြင်း၏ ခရီးစဉ်ကို Analyse လုပ်လို့ရလို့ဆီကုန်ကျမှုနှုန်းကို အတိအကျတွက်လို့ရမယ်။
ကားလမ်းကြောင်းတွေ ထပ်နေတာ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မြင်လာရမယ်။
ကားတစ်စီး တစ်နေ့ ဘယ်လောက်ခရီးသွားသလဲဆိုတာကို သူ့ရဲ့ Milage မီတာနဲ့ ပြန်တိုက်ကြည့်လို့ရမယ်။
Transport Manager ကောင်း တစ်ယောက်လက်ထဲ ဒီ information ထည့်လိုက်တာနဲ့ ကားအသုံးနဲ့ လောက်စာစဆီအသုံးကိုထိထိရောက်ရောက်လျှော့ချနိုင်ပြီး ယာဉ်မောင်းများကိုလည်း ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ထိန်းကျောင်းနိုင်မယ်။ကွင်းပုံများ မိမိကိုယ်တိုင်ပြုစုလို့ရ၊ အမြင့်ပါသိရမယ္။
Myanmar Map Update များအမြဲပြုလုပ်နေသော GIS Map
Myanmar GIS up to Village Track Level
မြေပုံများကို မိမိတို့လိုအပ်သည့် အရွယ်အစားထုတ်လိုလျှင်လည်းကောင်း
မိမိလုပ်ငန်းအတွက်မြေပုံများမှ လိုအပ်သည့် တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ပုံကြီးချဲ့ပြီထုတ်လိုလျှင်လည်းကောင်း
မိမိလုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်လမ်းကောင်းများကို ထင်ရှားပေါ်လွင်အောင်ပြုလုပ်ပြီး ထုတ်လိုလျှင်လည်းကောင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုများကိုအချိန်တိုအတွင်းအမြန်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
Yangon Map ကို GIS အဖြစ် Soft Copy ဖြင့်ရရှိနိုင်ပါပြီ။ ရန်ကုန်မြို့လမ်းများမြေပုံ (လမ်းအကျယ်များပါ)
အထင်ကရနေရာများ မြစ်ချောင်း၊ ရေကန်များကို GPS နှင့် ထပ်ကြည့်နိုင်ပါသည်။
GPS : Garmin, NAVA
Tourist Map of Myanmar Yangon Tourist Map The Map of Bagan